Ukwelashwa kwezifo ezihlukahlukene esebenzisa yokuxhumana ne izilwane isetshenziswa kwezokwelapha isikhathi eside. Futhi ekupheleni kwekhulu lamashumi amabili baqala ukukhuluma isiqondiso sakhe esisha - ihlengethwa. Ebhukuda amahlengethwa sekwande kakhulu. Ngokuvamile isetshenziswa ekwelapheni izinkinga nezifo of the system zemisipha psychotherapeutic. Kodwa ngaphezu zokwelapha eminyakeni yamuva nje iye yaba ukubhukuda ezivamile nge amahlengethwa futhi ukuzijabulisa. amaseshini ezinjalo ezibizayo, kodwa nazo ethandwa kakhulu. Abantu abaningi bafuna uphumule futhi uthole eziningi imizwelo eyakhayo, kuxhunyanwa nalaba izilwane ezimangalisayo.
Kungani ihlengethwa eziwusizo
Sekuyisikhathi eside waphawula ukuthi abantu namahlengethwa, kuningi ezifana ngakho: banalo inhliziyo emine chambered, isidingo-mpilo ukuphefumula, ikhono lokukhulumisana. Kodwa ososayensi baye bathola ukuthi lezi ezincelisayo nabanomusa ngokuvamile baqonde umuntu ongcono njengoba enza eminyakeni yamuva. Ngemva kokuxoxa nabo, waphakamisa isimo kubantu. Ngisho ivaliwe, futhi linamathele ukunakekelwa komuntu amahlengethwa ungakwazi ukuphoqelela ukumamatheka. Lesi sikhathi unikeza omningi imizwelo eyakhayo. Ngakho-ke, ebhukuda amahlengethwa futhi uyathandwa. Ngilusizo hhayi kuphela ukuxhumana kanye nemiphumela emihle ukuhlala emanzini usawoti, futhi ewusizo futhi umsindo yalezi zilwane. Kungcono ukuba abaqeqeshiwe bottlenose amahlengethwa futhi Beluga imikhomo. Ziyakwazi ezivamile dolphinariums kakhulu. Futhi bottlenose amahlengethwa kakhulu sensitive isimo umuntu nokuthi emagama lamanyenti, futhi Beluga udlule ezikhathini ezinzima.
Isiphi isinyathelo uye ebhukuda amahlengethwa
EMoscow Petersburg isivele kungenzeka ukuthola izindawo ezinikeza ujabulele ihlengethwa. Nakuba ekuqaleni kwalo kungenzeka kuphela iphendukele amadolobha. Abaningi baye bazama ukubhukuda namahlengethwa nabo bonke bathi ngisho esisodwa kunomthelela omuhle:
kuyinto imizwelo eyakhayo ayikhanyi kakhulu;
Kwenza ukubheka izinkinga ngezindlela ezintsha futhi ekubhekaneni nokucindezeleka;
Ithuthukisa isimo izifo wobuntu of the system zemisipha;
ephumula futhi usiza ukuzola;
kuthuthukisa kwemizwelo, kuthuthukisa ubuthongo;
Kuyasiza ukwesaba amanzi, futhi abe yedwa;
ukwelashwa nomndeni amahlengethwa kuletha nobunye ubudlelwano iphinde ivimbele agumenti.
Yikuphi izifo ukusebenzisa le ndlela
Ngokuvamile ebhukuda amahlengethwa isetshenziswa ekwelapheni izingane yezifo isimiso sezinzwa esiyinhloko. Umphumela omuhle is ebonwe-cerebral palsy, Autism, Down syndrome futhi retardation engqondo.
Le ndlela kusiza izingane ezikhubazekile inkulumo kanye inkumbulo, ukuzwa nokufunda ikhono ongaphakeme.
Lusebenza ihlengethwa nokucindezeleka, uvalo nokuphazamiseka kwemizwa, yokutakula kokulimala.
amaseshini ezinjalo aphumelele izifo kohlelo eziphathelene nenhliziyo uhlelo zemisipha.
yokwelapha Ihlengethwa iyasiza ngesikhathi sokukhulelwa. Ngaphezu nemiphumela emihle amanzi kungenziwa kuphawulwe nethonya ultrasound, okuyinto ishicilela amahlengethwa, kukhuthaza ukukhula kwezitho ezithile futhi kuthuthukisa impilo umama wengane sika.
Lapho ungakwazi ukubhukuda nge amahlengethwa
Iningi la masevisi zinikezwa resort. Kodwa ebhukuda amahlengethwa eMoscow wawungakuthenga eminyakeni yamuva. Yiqiniso, kuwufanele kuyabiza, futhi isidingo kweseshini eqoshiwe kusengaphambili njengoba zokufuna kakhulu. Omunye dolphinariums enhloko-dolobha, okuyinto inikeza ngamasevisi ezifana engabizi, ruble 3500, ngeshwa ivaliwe. Manje ukubhukuda nge zalezi zidalwa ezimangalisayo kungase kube i-7000-12 000 kweseshini "Moskvariume" noma Enea. Ingane kungcono ukukhetha umcimbi hhayi bezijabulisa a ukubhukuda zokwelapha nge amahlengethwa. Intengo ngasinye kuyoba kuleli cala, kancane - ruble mayelana 4000, ngoba ngaphambilini Yiqiniso. Ebhukuda amahlengethwa Petersburg ushibhile kancane - kusuka 4000 kuya ruble 9000, kuncike Dolphinarium.
Iningi la masevisi inikeza izivakashi ihlengethwa. Ebhukuda amahlengethwa kungenzeka emva siphakamiso noma nganoma isiphi esinye isikhathi. Kodwa kwenzekani kwisikhathi, udinga ukukhumbula imithetho embalwa:
ngaphambi kungcono bonana nodokotela wakho kuqala, njengoba ukwelashwa ihlengethwa anezinye Izimo, ezifana izifo ezithathelwanayo, izimila, isithuthwane kanye ukuvuvukala esikhumbeni;
ukubhukuda okuvamile amahlengethwa ezokuzijabulisa avunyelwe ukuba abadala nezingane abaneminyaka engama 12;
ukubhukuda kangcono kwezemidlalo Swimsuit noma wetsuit. Ezinye amahlengethwa ukunikeza izivakashi zabo, kodwa kungcono ukuba bakhe;
echibini ayivunyelwe ukucwila ne izindandatho, namasongo lazo ngisemaketangeni;
Dolphins - izidalwa eziphilayo kufanele aphathwe ngokucophelela nabo: Ungafaki iminwe e zabo blowhole (imbobo ikhanda), hhayi ukuphoqelela amakhono abo;
Akuvunyelwe kwemicimbi efana abantu sebedakiwe noma abakwazi ngokuzimela ukuntanta.
Ingabe kuyasiza njalo
Naphezu kweqiniso lokuthi ihlengethwa futhi ukubhukuda lula ne amahlengethwa ngokubaluleka kuthandwa, ososayensi abaningi kuyaphikisana nalokhu. Bakholelwa ukuthi isimiso esinjalo kungaba yingozi futhi kuyingozi ikakhulukazi ezinganeni. Phela uma amanzi enyakaza, amachibi dolphinariums ngokuvamile alihambisani SanPiN. Akunakwenzeka ukuyiguqula esidingekile - nsuku zonke 80%, ngakho-ke sasicwengwa esebenzisa chlorine ne hydrochloric acid. Ngaphezu kwalokho, amahlengethwa jeza izifo ezifanayo ezibangelwa amagciwane kanye fungal. Futhi ngaphambi kokuya esimisweni ihlengethwa angadingi izitifiketi zempilo. Futhi kungenzeka ukuthi ngaphambi zibhukude indoda pool nomuntu papilloma virus noma candidiasis. Ngakho it is hhayi Kunconywa ukuba khona umcimbi anjalo esikhathini dolphinariums ephathekayo.
Neva - umfula Petersburg
Idolobha Lenin Park, Sifundazwe: incazelo, umlando, imodi wokusebenza futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Likuphi Ryazhskiy zoo?
Clash of emkhunjini emkhunjini wezimpahla phezu Irtysh. imiphumela edabukisayo
Limassol Zoo: incazelo kanjani lapho, ikakhulukazi, ukusebenza kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Dennis Kasper: lokusungula, biography kanye nempilo yakho
Indlela ngempumelelo ukukhangisa incwajana
Breathing izivivinyo "Oksisayz": ukubuyekezwa, umthetho kokubulawa, umphumela kulindeleke
Amnandi amazambane pizza: iresiphi elula
Hearthstone nezidingo zomshini kukhompuyutha ephathekayo
Metro Tushinskaya - i esiteshini ebalulekile omkhulu impilo yasedolobheni
Siyaqonda ukuthi ukuhlanza odongeni "ukuxhumana"
Alena Shishkova: Biography Timati unkosikazi